“Ma macsalaameyn Pogba waxna kama ogi arrinkiisa,”. Tababaraha Juventus Allegri – Gool FM
“Ma macsalaameyn Pogba waxna kama ogi arrinkiisa,”. Tababaraha Juventus Allegri
(London) 07 Agoosto 2016. Manchester United ayaa ogolaatay heshiis ku kacaya 110-milyan oo bound ay kula soo wareegeyso xiddiga Juventus Paul Pogba.
Labadan kooxood ayaa xaqiijiyay in 23-jirka reer France uu ku sugan yahay magaalada Manchester si uu tijaabada caafimaad u maro.
Laakiin Tababaraha kooxda reer Talyaani Max Allegri ayaa sheegay inuusan waxba ka ogeyn arrinkan mar wax laga waydiiyay kaddib guushii ay kooxdiisa 3-2 uga adkaatay kooxda West Ham kulan saaxibtinimo oo dhawaan ka dhacay London.
“Ma macsalaameyn, waxba kama ogi” Allegri ayaa sidaa yiri.
“Waxaan ka hadli karaa oo kaliya kulanka saaxiibtinimo.
“Intaa kaddib, haddii uu Pogba aado Man United waxaan dhihi doonaa macasalaama.”.
Pogba ma uusan joogin Wembley ciyaartii ay Man United 2-1 uga adkaatay Leicester City Community Shield, laakiin waxaa la aamisan yahay inuu joogo Manchester isagoo isku diyaarinaya tijaabada caafimaad uu ku marayo xerada tababarka Carrington.
Waxaa la fahansan yahay in Pogba uu usbuuciiba adduun dhan 275,000 oo bound mushaar ahaan uga qaadan doono kooxda ka arrimisa Old Trafford.